Salaadda Saint Ignatius ee Loyola. ? Si Looga Saaro Dadka iyo Cadowga
Ducada Saint Ignatius ee Loyola Waa mid aad u awood badan tan iyo markii uu ku jiray dhulka this waxa ugu weyn ee isaga u ahaa had iyo jeer waa in la rumeeyo oo la caawiyo dadka kale.
Tani waa sababta uu ku guuleystey waxyaabo waaweyn marka laga reebo inuu yahay nin rumaysta ee ereyga Ilaah iyo ku dhaqma caqiidada masiixiga. Waxay ahayd iimaanka xoogga leh ee had iyo jeer heystay wixii isaga caawiya ilaa uu neefsashada ugu dambeysa u yeelo doonista Rabbiga.
Hadda waa kaniisad katoolik ah oo la garaacay oo la canoni karo sababtoo ah mucjisooyinka waaweyn ee uu siin jiray xitaa ka dib markuu ka tegey dalkan.
Addoonkii erayga Eebbe uumay abuurka ah ee maanta ina taageeraya ayaa naga caawiya ka soo bax xaaladaha xun.
Wax kasta oo aan u baahanahay waxaan u maraynaa, runtii San Ignacio de Loyola wuxuu gacantiisa ku jiraa gacantiisa sidii uu noo siinlahaa.
1 Salaadda Saint Ignatius ee Loyola Waa kuma?
1.1 Salaadda Saint Ignatius ee Loyola si dadka looga fogeeyo
1.2 U soo ducee Saint Ignatius ee Loyola cadaaweyaasha
1.3 Ducada badbaadada
1.4 In laga ilaaliyo deriska xun
Salaadda Saint Ignatius ee Loyola Waa kuma?
Taariikhdu waxay noo sheegaysaa in Ignacio de Loyola wuxuu ku dhashay sanadka 1491. Wuxuu sameeyay shaqo militari sidii caadadii ahayd qoyskiisii. Si kastaba ha noqotee, wuxuu soo gaadhay dhaawac ka horjoogsaday inuu sii waddo waxbarashadiisa militariga sidaasna wuxuu ku bilaabay inuu noqdo rumeeyaha caqiidada masiixiga.
Bilaabay qabashada dib u gurasho xagga ruuxa ah wuxuuna go’aansaday inuu ku daro xoogaa laylisyo dheeri ah tababarkana waxay ahayd markii uu bilaabay inuu dhaleeceeyo kuwa kale ee raacay hal tababar oo keliya. Ka dib markii habab badan oo ay ahayd in laga gudbo ay ka bilaabmaan Shirkadda Ciise taas oo ah noolaha in maanta wax walba wuu ka shaqeeyaa dunida.
Wuxuu ku dhintay Roma Sanadkii 1556 kadibna waa la garaacay 1609 ka dibna canoniis 1922. Waxaa lasiiyay July 31 si uu ugu dabaaldego dhalashadiisa waxaana lagu xasuustaa adduunka oo dhan.
Salaadda Saint Ignatius ee Loyola si dadka looga fogeeyo
Hooyo Barakaysan, Hooyo Jannada ka sarraysa iyo samada, oo kugu dhiirrigelisay iftiinka hooyadaa Saint Ignatius ee Loyola, inaad raacdo waddada adeegga wadaadnimada, inaad naftiisa u hurto ruuxiisa si uu ugu adeego, shaqo iyo tusaale ahaan, aadanaha , Waxaan kaa codsanayaa, si khushuucsan, i cafi khaladaadkeygana ii oggolow, cibaado weyn oo aan kuu sheego, in Saint Ignatius ee Loyola ay igu ilaaliso, iyadoo ciidanka xagga iimaanka, aniga oo ka kaxeynaya deegaankeyga dadka kaliya ee raba inay waxyeello ii geystaan, waxaan kaa codsanayaa inaad dhinacayga ka celiso oo aad u sheegtid inay wanaagsan tahay inay wanaag sameeyaan. Aamiin
Hadaad rabto inaad dadka kaxayso, kani waa salaadda saxda ah ee Saint Ignatius ee Loyola.
Markuu Ig Igacacio de Loyola ka gudbay silcinno badan dartiis diintiisa darteed, wuxuu badbaaday.
Xoog badan, dagaalyahan ah, ilaa maantana, waa tusaale quduusnimada in kastoo ay jiraan duruufo badan. Wuxuu naga caawin karaa inaan adkeyno xaaladaha adag.
Ama looga kaxeeyo dadka dhib badan, tabar darrada xun, xaaladaha xun ama wax kasta oo xadaya nabadeena.
Kaliya waa inaad rumeysan tahay inuu leeyahay awood uu ugu doodo horteenna aabaha jannada hortiisa sidaas darteedna xaalada ama qofka ayaa ka dhaqaaqa nolosheena gebi ahaanba.
U soo ducee Saint Ignatius ee Loyola cadaaweyaasha
Inta badan Aabbaha Quduuska ah Saint Ignatius ee Loyola, aasaasaha Bulshada Ciise; laga dhex doortay kumanaan si ay u fidiyaan ammaanta Ilaah ee afarta geesood ee dunida; ninka ugu caansan dhammaan noocyada wanaagga ...
Laakiin gaar ahaan daahirnimada ujeeddada oo aad markasta u xiisayn jirtay ammaanta Ilaah oo weyn; geesi caan ku ah towbad keen, is-hoosaysiin iyo taxaddar; aan la daalin karin, joogtaysan, ugu go'an, ugu caansan; sadaqada ugu wanaagsan ee xagga Eebbe, iimaanka noolaha badan iyo rajada adag ...
Waan ku faraxsanahay, Aabbe gacaliyahayga, inaan kugu arkaa adigoo ku hodan ah hambalyo fara badan oo caan ah, waxaanan kaa baryayaa inaad gaadhsiiso carruurtaada oo dhan ruuxa ku dhiirrigeliyey, iyo aniga ujeedada saxda ah, in xitaa waxyaalaha ugu yar aan u baadi goobaayo ammaanta rabbaaniga ah, Anigoo ku daydaya inaad waxaas yeeshaan, oo sidaasaan u shaqeeyey inaan ammaan idinka dhex noqdo oo aan idinku noqdo.
U soo ducee salaadda Saint Ignatius ee Loyola oo ka dhanka ah cadaawayaasha oo leh iimaan weyn.
Cadaawayaashu waxay jireen bilowgii abuurista oo San Ignacio de Loyola ayaa lahaa oo waxay ku soo baxeen guuleystaha dhammaan xaaladihi uu soo maray, midkoodna ma sahlana.
Tani waa sababta aan isaga u weydiiyay gaar ahaan jumladda ka dhanka ah cadaawayaasha Saint Ignatius ee Loyola ayaa naga caawin kara xallinta xaalado badan oo bini-aadamka ay adkaan karto in laga adkaado.
Salaadaha lagu sameeyay iimaanku waa xoog badan yihiin oo markii ujeeddooyinku wanaagsan yihiin oo ay salaaddu u soo ifbaxdaa sida qaylada ka soo baxda nafta baahan ma jiro wax annaga noo keeni kara.
Sharafta Saint Ignatius ee Loyola, aasaasaha Ururka Ciise iyo qareen qaas ah iyo ilaaliye aniga!
Maaddaama aad Jannada aad ugu sarreyso inaad shaqooyinkaaga u qabatay si aad u weyn oo u ah ammaanta Ilaah, inaad la dagaallanto cadaawayaasha kaniisadda, adoo difaacaya iimaankeena quduuska ah, kuna ballaarinaya carruurtaada adduunka oo dhan ...
Igu soo ducee cibaadada rabbaaniga ah, ee muddooyinka aan dhammaadka lahayn ee Ciise Masiix, iyo ducaadda hooyadiis ammaanta leh, dembidhaafka oo dhan iga cafiya, caawimaad wax ku ool ah inaan Ilaah jeclaado oo isaga ugu adeego dadaal kasta oo hadda ka dambeeya, adkaynta iyo ku-adkaysashada jidka wanaagga, iyo farxadda dhimashadii saaxiibtinimadiisa iyo nimcada, si aad u aragto, u jeclaato, uga raaxaysato oo isaga ugaga ammaana shirkaddaaga qarniyo badan.
Ma jeceshahay ducada San Ignacio de Loyola ee ilaalinta?
Wuxuu yaqaanaa sida loo ilaaliyo loona ilaaliyo iimaanka iyo waxa uu rumeysan karo xitaa waqtiyada ugu xun tanina waxay isaga ka dhigaysaa ilaaliyaha kaniisada masiixiga.
Isaga xaggiisa ayaan u tukan karnaa salaaddaheena weydiiso badbaado waqtiyada adag anaga ahaan ama qoyskeenna guud ahaanba.
Dhammaan xaaladahaas oo sababa xasillooni darro waa in lagu hayaa hortiisa joogitaankiisa si uu noo caawiyo.
In laga ilaaliyo deriska xun
Saint Ignatius ee Loyola, oo ah mu'min aamin ah oo caqiido katoolik ah, oo ka ilaalisay hadallada qalloocan, ka ridashada iyo faasiqnimada munaafaqnimada ah, ee laga soo saaray Katolik-ka, waxaan kaa baryayaa inaad iga fogaato, maadaama adiga iyo xertaada aaminka ah ee Jesuit ay ka leexdeen. Kuwaas oo iyagu kor u qaaday burburintoodii kiniisadda, waxaan kaa baryayaa inaad iga fogeyso dadka xun xun, oo iska fogee derisyada xun xun, Oo cadaawayaashayda ka fogee waddadayda, Saint Ignatius of Loyola, cibaadada quduuska ah ee Ciise Masiix, wanaaggaaga iyo Nimco waan gudbiyaa. Aamiin.
Hadaad rabto inaad kaxeysato deriska xun, waa inaad dhahdaa salaadda Saint Ignatius ee Loyola.
Dariska, waqtiyo badan, waxay noqdaan qoyskeena maxaa yeelay duruufo badan ayaa ah kuwa ugu dhow ee aan heysano.
Tani waxay noqon kartaa wax wanaagsan, maxaa yeelay inaad yeelato qof kuu dhow weligiis ma jiro, laakiin markay deris xumo yihiin, wax walbana way murugsan yihiin. Iyagu waa dadka iyagu cadawgayaga noqda oo mar kasta nolosheena ka dhigaya wax aan macquul ahayn.
U soo ducee, taasi waa inay had iyo jeer noqotaa difaacayaga xitaa xaaladahaas oo aynaan si fiican u garanayn waxaynu samayn lahayn.
San Ignacio de Loyola ma naga caawin kartaa sidii aan uga fogaan lahayn deriskaas xun kuwaas oo u yimid inay wax ka beddelaan xasilloonida nolosheenna iyo kuwa nagu wareegsan oo dhan.
Saamaynta xun ee ka buuxinaysa bulshada oo dhan tabar darrooyinka xun ee ah in aan ka dhaqaaqno ka hor inta ayan u keenin waxyeelo badan wada noolaanshaha deegaanka.
Waa inaan nahay Weydii inay ka guuraan adigoon wax dhaawac ah u geysan, adigoon ka tagin saameyntooda oo aad iska fogeyso dhammaan tabarrada taban, salaadda xoogga leh ee ina caawin doonta wakhti kasta.
Waad awoodaa waana inaad.
Kaliya waxaad u baahan tahay inaad qalbigaaga ku haysatid rumaysad. Iimaanku wuxuu ka dhigayaa dhammaantood inay shaqeeyaan.
Waa inaan had iyo jeer rumeeysannahay awoodda St. Ignatius ee salaadda Loyola si aan uga hor tagno dadka iyo cadawga.
Markaa, waad hubsan kartaa inaad had iyo jeer heli doontid caawimaad rabaani ah.